ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုသည်က ကြီးထွားခြင်းနှင့် မတူ။ လုပ်တတ်လာခြင်း၊ နားလည်လာခြင်းဟု အလွယ်ပြောနိုင်သည်။ အသက်သုံးလအရွယ်ကလေးကို ခါးမတ်မတ်လေး ကိုင်ပေးလိုက်ပါက ခေါင်းလေးက သူ့ဟာသူ လိုက်ထောင်နိုင်လာသည်။ အသက်လေးလ ကလေးကို ကိုယ်နှင့်ခြေ မတ်မတ်လေးစားပွဲပေါ် ထောင်ကိုင်ထားပါက ခြေဖဝါးလေးနှင့် သူ့အလေးချိန်ကို သူစမ်းထိန်းကြည့်လာသည်။ မှောက်တတ်လာ၊ လှန်တတ်လာတာ သိပ်အရေးမပါလှ။ အသက်လေးလ ကလေးကို မှောက်ခုံလေး ချထား...
၃၇.၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ( ၁ဝဝ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် )ထက် ပိုအောင်ပူလာတဲ့အသက်ခြောက်လအောက် ကလေးငယ်များဟာ ကိုယ်ပူချိန်ကြာလာရင်တက်တတ်တဲ့အတွက် စိတ်ပူရပါတယ်။အရင်ဆုံးဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲ ???? (၁) ကလေးကိုယ်ပူနေတယ်ထင်ရင် အဖျားတိုင်းကြည့်လိုက်ပါ။မသေချာသေးရင် မိနစ် ၂ဝလောက်အကြာမှာ တစ်ခါထပ်တိုင်းကြည့်ပါ။(၂) ကလေးကို အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်ထားပါ။ ချည်ထည်ပါးပါး...
ဘာကြောင့်ခေါင်းစောင်းတာလဲ? ဖြစ်ပွားရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ လည်ပင်းထောက်ကြွက်သား တိုနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပင်းထောက်ကြွက်သားဆိုသည်မှာ နားအနောက်မှစ၍ ညှပ်ရိုးကိုတွယ်ဆက်ထားသော လည်ပင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရှိသည့် ကြွက်သားချောင်းကြီးဖြစ်သည်။ တိုနေသောဘက်မှ ကြွက်သားသည် ကလေးခေါင်းကို တိုနေသောဘက်သို ့ဆွဲချသလိုဖြစ်သွားသည်။ ထိုအခါ ခေါင်းစောင်းသွားသည်။...
ကြီးထွားသောမွေးစကလေးများအတွက် အဝလွန်ရောဂါ အန္တရာယ်
ကြီးထွားသော မွေးစကလေးများ သို့မဟုတ် အသက်အရွယ်၏ ပထမနှစ်ကာလတွင် ကြီးထွားလျှင်မြန်သူ ကလေးများအနေဖြင့် ကလေးအရွယ်နှင့် လူလတ်ပိုင်းအရွယ်များတွင် အဝလွန်ရောဂါ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း သုတေသနများက ဆိုကြသည်။ ဤတွေ့ရှိမှုကို ဗြိတိသျှ ဆေးသိပ္ပံဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ရာ၌ လေ့လာမှု ၂၄ခုတွင် မွေးစကလေး ၄၀၀၀၀၀ ကျော်ကို လေ့လာမှုပြုခဲ့ကြသည်။ စာရေးသူများက ယုံကြည်ကြသည်မှာ အစားအစာကျွေးမှုနှင့် နို့ဖျက်သည့် အချက...
ခေါင်းစဉ်မေးခွန်းကို ဖြေရမယ်ဆိုရင် ဟုတ်ကဲ့ ကလေးတွေမှာ သန်ချကိုချသင့်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလေးဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကိုက မြေကြီးတွေ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ဆော့ကစားလေ့ရှိပြီး လက်ကိုစင်ကြယ်စွာမဆေးကြောတဲ့အခါ ကပ်ပါလာတဲ့ သန်ဥများလက်မှတစ်ဆင့် ပါးစပ်ထဲရောက်နိုင်ပြီး သန်ကောင်များပေါက်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ခါ (သို့မဟုတ်) ခြောက်လတစ်ခါ ကလေးတွေကို (လူကြီတွေလည်းတူတူပါပဲ) သန်ချသင့်ပါတယ်။ သန်ရှိနေပြီ...
ကလေးငယ်ရဲ့ သာမန်ကိုယ်အပူချိန်ဟာ ၃၆.၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် မှ ၃၇.၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ( ၉၆.၈ မှ ၉၈ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် ) အတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၃၇.၇ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၁၀၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) နဲ့ အထက်ရှိလာရင် ကိုယ်ပူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ကိုယ်အပူချိန်ဟာ ကလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမူ၊ ပြေးလွှားကစားမှုအခြေအနေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးပြောင်းလဲတက်ပါတယ်။ ကလေးများရဲ့ ဦးနှောက်မှာရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ထ...
ကလေးများတွင်ဖြစ်တတ်သော နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး (၂)
တောက်ပသည့် အနီ၊ အဝါ အရောင်ရှိသော အသီးအနှံများနှင့် အရွက်စိမ်းစိမ်းတို့၌ ဗီတာမင် အေ (Vitamin A) ဓာတ်ပါကြသည်။ ထို ဗီတာမင်အေသည်လည်း အဆုတ်ရောင်ရောဂါကို အဖြစ်နည်းစေပြန်သည်။ အဆုတ်ရောင်ရောဂါကို အဖြစ်နည်းစေပြန်သည်။ အဆုတ်ရောဂါ (တီဘီရောဂါ)၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါနှင့် ဝက်သက်ရောဂါတို့သည်လည်း အဆုတ်ကို ရောင်ပွစေနိုင်သဖြင့် ကလေးအား ထိုရောဂါများ မဖြစ်အောင် အသက်တစ်နှစ် မပြည့်ခင် ၎င်းကာကွယ်ဆေးများကို ထို...
ကလေးများတွင်ဖြစ်တတ်သော နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး
နှာရည်တွဲလွဲနှင့် ချောင်းလေးတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးနေကြသော ကလေးများကို နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးပဲဟု ဂရုမစိုက်ဘဲ နေလိုက်မိလျှင် အဆုတ်ရောင်ရောဂါသို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး ဒုက္ခရောက်နိုင်သည်ကို မိဘတို့ သိဖို့လိုပေသည်။ များသောအားဖြင့် နှာစေးချောင်းဆိုးရောဂါတို့သည် သူ့အလိုလို ပျောက်သွားတတ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ထိုနှာစေးချောင်းဆိုးမှ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဝင...
မွေးကင်းစ မေးခိုင်ရောဂါသည် အောက်ဆီဂျင်မရှိသည့် နေရာများဖြစ်သော အနာ၊ပြည်၊ မသန့်ရှင်းသည့် အရေပြား အစရှိသည်တို့တွင် ပေါက်ဖွားပွားများလေ့ရှိသော ဗက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ဖြစ်ရပါသည်။ထိုပိုးမှ အဆိပ်တစ်မျိုး ထုတ်ပါသည်။ ထိုအဆိပ်ကြောင့် လူနာ၏ ကြွက်သားများ ဆတ်ခနဲ့ဖြစ်ခြင်း၊ ဇက်လန်ခြင်း။ ကျောကော့ခြင်း ၊တက်ခြင်း အစရှိသော လက္ခဏာများ ပြလေ့ရှိပ်သည်။ ရောဂါ...